Kuvimbika Guarantee - hannari-shopu
Ichokwadi chakavimbiswa kana mari back
Isu tiri wechipiri-ruoko mutengesi unobvumidzwa neJapan National Public Safety Commission. Takatenga zvinhu kubva kumisika yemutengesi uko hove dzinonyatsorambidzwa. Ndokumbira ubike nekuvimba.100% Ichokwadi Anovimbisa.
Kune akawanda fakes pawebhu, uye isu tinokunzwisisa iwe sezvatiriwo CHANEL mudiwa. Nzira nhatu dzatingakurudzira iwe ndeidzi:
1. Ndokumbirawo kuti muite chinguva muchinyatso tarisa mifananidzo yacho? Izvo zvinhu zvakaita seams, hardware, uye dehwe, usambonyepa, uye tinotenda kuti unogona kusiyanisa. Tichafara kutumira mapikicha akakura pane chako chikumbiro.
2. Iwe unogona kushandisa iyo chaiyoiyo online. Izvo zvinongoda $ 5 kana zvakadaro. Kana saiti inozivikanwa yekusimbisa; ex. Puru foramu; yaizokubatsira iwe.
[Kana paine dambudziko pamusoro pechokwadi]
3. Iwe unogona kudzoka, uye tinokubhadhara iwe tese mutengo (chinhu, kutumira kune yako nyika, kutumira kubva kune yako nyika)
Iko kudzoka kunogamuchirwa kana kuchiratidzwa kuve kwekunyepera nemucherechedzo mushure memazuva 14 kubva pazuva rechinhu chakagamuchirwa. Mutengi anofanira kuendesa gwaro rakanyorwa nemhando yacho. Isu tichakuudza kuti ungaitore sei. Chero rondedzero nebato rechitatu harizotorerwe segwaro rinoshanda.